Linen teepee - Moi Mili
Ny tranokala amin'ity sokajy ity dia miavaka sy tsy manam-paharoa noho ny fampiasana rongony 100% mendri-kaja. Nozairina ho an'ny olona tia ny fomba Scandinavian voajanahary. Mahafinaritra azy ireo ny fahatsorana sy ny endrik'izy ireo.
Ny teepee dia manana rindrina 5 sy fototra pentagonal, mampiorina tsara kokoa ary lehibe kokoa noho ny lay misy lay. Ny lamba rongony ampiasaina ao Polonina. Ny tipi dia mitondra manual ary fonony. Mampirisika anao izahay hamorona seta miaraka amin'ny kojakoja ary fitaovana.
Tranolay lamba teepee "Marsala"
Tranolay rongony teepee "rongony voajanahary"
Tranolay lamba lamba "Biel"
Tenda lamba lay "Maditra"
Tranokely lamba jamba «Granat»